HomeAfaan OromooSeenaa Magaalaa Finfinnee Kana Dubifneefi Kana Dhagenye Irra
Adem_Misoma Irraa, Muddee 2, 2018
Finfinneen haandhura Oromiyaati. Bara 1886 ykn dhufaati ilman garbboomfattu; Miniliki dura SIRNA GADAA MACCAA FI TUULAAMA tin hogganama turte. Finfinneen wiirtuu Maccaa fi Tuulaamati. Akkasumas magaalaa Gudditti Oromiyaati. Bakka harra masaraa biyyoleessa/galmii, Miniliki itti ijaarame ilmaan, Abisiniyaa bara dhufaa darbaa irra ta’ani impayeera Itiyoophiyaa afaan qawween tiksaan sun galmaa Abba Gadaa Tuufaa Muunaa ture. Warri, Abisiniyaa dha beelaa fi lolan biyya isanirraa godaanani dhufaan. Lolaa fi afaan qawween, Finfinnee dhuunfatan. Sababiin isaas humnoota biyyota alaatin lenji’ani, meeshaa jabanaa bara sana hidhachiifamani jaarmiyaa siyasaa fi amantiitiin ijaaramun hoggansaa fi hoggana wal-ta’a qaban. Sadarkaa sanatti, Oromoon sirna Gadaa yoo qabatellee haggansa, hogganaa fi jaarmiyaa wal-ta’aa, Oromoo guutuu hammatu dhabuun sababii dadhabina keessa qabu ture. Deggersa humnoota alagaa dhabunis shora olana qabaatera. Abbotin Gadaa Oromoo ballina lafaa fi lola guyya guyyaa irratti godhamurraan kanka’e sirna Gadaa fi bulchiinsaa gosaa gosaatti, Oromiyaa addan qoqqoaddatan. Kun immo kufaatii hamma harra, Oromoon keessaa dhidhitachaa jiruuf saaxile. Laalaa sana waan ofirra qabnuuf harra gosa, amantii fi naannoon ijaaramuun bu’a isarra balaa/gaga’ama isatu caala jenne ifatti dubbacha jirra. Qabsoo waggota shantamaan goonee kana keessattis kanumatu mirkana’e. Harralle sadarkaa Qabsoon Bilisummaa Oromoo/QBO galma ishetti dhi’acha jirtutti gosummaa fi naannumman of-duuba deebisa jira. Kufaati keenya kaleessaa of booda yommu millannu fi dadhabina keenya yommu qorannu gosummaa fi naannumman gufuu keessaa, Oromoo ture dha. Harraas dhibdeen guddaan keessa, Oromoo isuma kaleessa sana. Ilmaan garbbomffattu, Habashaa dadhabina keessa keenya kanattii daraan injifannoo gudda argatan. Harras rakko sana irra aanu dadhabne.
Akka lakkofsa ummata 2008 taasifametti ummata magaalaa Finfinnee 3,384,569 tu lafa 5,165.1/km2 (13,378/sq mi) irra jirata.
34. Kormaa ykn Raaroo……………………Res Tesema sefer,tikur anbesa,immigration